अष्ट्रेलियामा समातिए दुई नेपाली, यस्तो छ कारण – Janata Times
सिडनी, असार ९ । अष्ट्रेलियामा दुई नेपाली पक्राउ परेका छन् । अष्ट्रेलियन प्रहरीले पश्चिमी सिड्नीबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले २२ वर्षीया नेपाली युवती नेहा गिरी र १९ वर्षीय युवक आयुष भट्टराईलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । उनीहरुमाथि ८५ वर्षीया एक वृद्धालाई ठगी गरेको आरोप छ । दुवै जनाबिरुद्ध छलकपटपूर्वक पैसा असुल गरेको अभियोगमा पाँचौं दर्जा र जानाजान आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा तेस्रो दर्जाको मुद्दा लगाइएको छ ।
नाइनन्युजको समाचारमा जनाइएअनुसार ठगीमा परेकी भनिएकी महिलालाई बैंकबाट बोलेको र उनको नयाँ खाता खोल्नुपर्ने एक कल आएको थियो । फोन गर्ने व्यक्तिले नयाँ खाता खोल्नका लागि तीन हजार डलर कुरियर गरेर पठाइदिन भनेका थिए । उक्त पैसा उनको खातामा जम्मा हुने बताइएको थियो । पैसा लिन मानिसहरु वृद्धाकै घरमा पुगेका थिए । पैसा बुझाएपछि वृद्धा प्रहरीमा गइन् । त्यसबेला पनि उनलाई ठगी गर्ने समूहबाट फोन आएको थियो । उनीहरुले थप पाँच हजार डलर आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रहरीले बृद्धाको घरमा पैसा लिन पुगेका दुई नेपाली गिरी र भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ । दुवैलाई मंगलबार पारामट्टा स्थानीय अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । उनीहरुलाई अदालतले जमानतमा छाडन अस्वीकार गरेको । अदालतको अर्को सुनुवाइ अगष्ट २० मा हुनेछ ।
Related tags : अष्ट्रेलियामा समातिए दुई नेपालीयस्तो छ कारण
वाह ! ७० वर्षीय दमका रोगीले सहजै जिते कोरोना
भीम रावलको प्रश्न : कांग्रेसलाई नेपाली भन्दा विदेशी चेली प्यारो लागेको हो ?
एनआरएनए अमेरिका निर्वाचन : सूर्य लम्साल टीमको एकै दिन दुई कार्यक्रम
जुवातासप्रति कठोर बन्यो प्रहरी, पाँच जिल्लाको जुवा खालबाट लाखौं रुपैयासहित समातिए एक सय तीन जुवाडे